Boston oo ku biirtay magaalooyinka looga baroordiiqay Gumad shacbiyedkii Muqdisho |
Boston oo ku biirtay magaalooyinka looga baroordiiqay Gumad shacbiyedkii Muqdisho
Iyada oo ay magaalooyin badan oo kuyaala aduunka daafihiisa sida Paris, Toronto, London, Minneapolis, ayaa waxaa liiska dabada kasoo qabsaday magaalada Boston ee cariga dalkan Maraykanka. duqa magaalada Boston Marty Walsh ayaa hore ugu tacsiyadeeyay dadkii ay wax yeeladu kasoo gaadhay qarixii ismiidaaminta ahaa ee lala beegsaday isgoyska Oct 14.
Dhacdadan ay Argagixisada Khawaarijiintu ku gumaadeen dadka ay Soomaalidu u taqaan Birmo Gaydada, tasoon aan marnaba la’ilaawidoonin. Hadaba Aqalka looga Taliyo Magaalada Boston ayaa lagu shiday nalal matelayay calanka Jamhuurida Soomaaliya xalay.
Jaaliyada Soomaalida ee reer Boston ayaa ku howlan inay gacan qabtaan dadkooda ay wax yeeladu kasoo gaadhay weerarka axmaqnimo ee isgoyska Oct 14, iyada oo waliba ay saaka Balcad dusheeda ay miino ku gumaadeen shacab saarnaa caasi kasoo ka anbabaxay Muqdisho kuna sii jeeday Jawhar.
Muqdisho waxay uga baahan tahay Baroordiiq dadyowga aan Soomaalida ahayn balse Soomaalida waxaa looga baahan yahay Dhiig ama Dhaqaale, dhiig shub hadii aad Muqdisho Joogtid hadii aad Boston Joogtidna dhaqaale u dir dadka dhibaateesan oo badankooda aad ka heli kartid baraha Bulshada ama Dawlada Soomaaliya xafiiska Gurmad Qaran.